Malunga nathi -iLangfang Bonai yoKhuselo lokusiNgqongileyo kweTekhnoloji Co.
I-Langfang Bonai Environmental Technology Co, Ltd. yasekwa ngo-2008 kwaye igubungela indawo ye-15,000 yeemitha zesikwere. Ukuqala kwizixhobo ze-FRP, ityale i-12 yezigidi kwaye inabasebenzi abangama-76, kubandakanya nabasebenzi be-R & D aba-3. Ngo-2010, yazisa ngemigca emibini eqhubekayo ye-FRP evela e-Australia. Kukho imigca emi-3 yemveliso yethayile kunye nemigca emi-2 yebhodi yemveliso yebhodi, enexabiso lonyaka elingaphezulu kwezigidi ezingama-80.
Inkampani yethu iphuhlise ngokulandelelana kwaye yavelisa iipaneli zophahla lwentsimbi kunye neepaneli zodonga kunye neJamani kunye neJapan, ikakhulu ivelisa iiphaneli zokukhanyisa, iipaneli zokulwa umhlwa, iiphaneli zedyasi yejeli, iiphaneli zelangatye ezikhawulezayo, iithayile zentlaka, iiphaneli zelanga, i-FRP gutters, njl. ukuthumela kumazwe angaphezu kwama-40 kunye nemimandla, wamkelekile ukuba uze kuhlola.
"Ukwaneliseka kwabathengi kukusukela kwethu ngonaphakade" iibhodi ezikumgangatho ophezulu, inkonzo egqibeleleyo emva kokuthengisa, ukuphendula imibuzo yabathengi kwinqanaba lokuqala, ukubonelela ngeebhodi ezikumgangatho ophezulu, kunye neenkonzo ezigqibeleleyo emva kokuthengisa zizinto ezintathu ezisisiseko. Ukoneliseka kwabathengi yinjongo yoxanduva olungapheliyo lwabantu be-FRP: Umgaqo kaBonai: "Umgangatho wokuqala. Ulawulo lokunyaniseka" lusekwe ekunyanisekeni, okusekwe elukholweni, kwaye ngokubhekisele kumgangatho njengekhadi lokuqala leshishini labantu beBonai FRP abanokudlulisela kubathengi. IBonai isebenzisa ingqibelelo kunye nomgangatho. Khonza njengebhulorho yonxibelelwano nabathengi;
"Inzululwazi nobuchwephesha zezona mveliso zokuqala kunye nomthombo wenkqubela phambili yebhodi yeBOER" yabathengi .Ukubonelela ngeebhodi ezikumgangatho ophezulu luxanduva olungenakuphepheka lwabantu baseBonai kunye nelitye lembombo kuphuhliso lomntu wonke;
Inkolelo eqinileyo, hamba ngesandla, yenza okuqaqambileyo, yenza isibhakabhaka esitsha esiluhlaza kumzi mveliso we-FRP!